नेप्सेका कारण लगानीकर्ता निरास, सेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > नेप्सेका कारण लगानीकर्ता निरास, सेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को सिस्टममा देखिएको खराबीका बाबजुत पनि सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकको कारोबारमा समस्या देखिँदा नेप्सेको इन्डेक्स नै तलमाथी भएको थियो ।
बुधबारको कारोबारमा लगानीकर्ताहरुलाई अर्डर राख्न समेत समस्या भएको थियो । यो दिन नेप्सेको सिस्टमले गर्दा लगानीकर्ता निरास समेत बनेका थिए । सिस्टममा समस्या आउँदा लगानीकर्तालाई इन्डेक्स हेरेर कारोबार गर्न निकै समस्या भएको छ । सिस्टममा समस्या आउँदा पनि नेप्से मापन सूचक १२.५६ अंकले बढेर इन्डेक्स २५९९.०७ अंकले बढेको छ ।
२०४ कम्पनीको १ करोड ६७ लाख २६ हजार ४७२ कित्ता सेयर ६ अर्ब ७० करोड १८ लाख ७२ हजार ४३९ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबारमा अधिकांश समूहको सूचकमा सुधार देखिएको छ । बैंकिङ समूह १५.०६, विकास बंक १८.७१, निर्जीन बीमा १८४.३४, उत्पादन तथा प्रशोधन ५४.०४, माइक्रोफाइनान्स २२.१५, जीवन बीमा समूहको उपसूचक १८०.८९ अंकले बढेको छ । जलविद्युत समूहको उपसूचक २२.९३ अंकले घटेको छ ।
कारोबार रकमको आधारमा नेपाल बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । बैंकको ५८ करोड २५ लाख ७५ हजार ८२९ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । कारोबारमा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स, नेपाल फाइनान्स, चन्द्रागिरी हिल्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।इन्फ्रास्टक्चर बैंक, अरुण भ्याली हाईड्रोपावर, आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।
२०७७ फागुुण १२ गते १५:१२ मा प्रकाशित
नेपालमा पनि एक्जिम बैंक !
सेयर बजारमा मार्जिन लेन्डिङ बारे कति थाहा छ तपाईलाई ?
असार मसान्तभित्रै सेन्चुरीले ल्याउने भो करोडौंको सेयर !
यूरो क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत
नक्कली भ्याट बिलमा सरकारको अनुसन्धान हुँदै